ဆန်နီနေမင်း: ဒီလိုလေး ငြင်းခဲ့တယ်။ သေချာဖတ်ကြည့် ဗဟုသုတရလိမ့်မယ်
ဒီလိုလေး ငြင်းခဲ့တယ်။ သေချာဖတ်ကြည့် ဗဟုသုတရလိမ့်မယ...
ဒီလိုလေး ငြင်းခဲ့တယ်။ သေချာဖတ်ကြည့် ဗဟုသုတရလိမ့်မယ်
ဦးဇင်း ကျမ်းတင်ဖို့ ခေါင်းစဉ်ကို တက္ကသိုလ်က Professor ပါမောက္ခချုပ်နဲ့ သုံးရက်တိုင်တိုင် သွားဆွေးနွေးရတယ်။ ဦးဇင်းက ကိုယ်ရေးချင်တဲ့အကြောင်းလေးကို ဒီလိုလေး ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
I want to do research for Master of Philosophy degree these two topics. Can you choose them one of for me please? These are my research titles.
1. A study of Buddhist social characteristics of five precepts
2. The analyses of the universal characteristics of preserving five precepts
I think that someone become part of one’s life. There are five important aspects of life. This era some children very bad and they don’t know about religion exactly. If they know about religion will be abstain from killing, stealing, sexual misconduct, lying and drink that cause heedlessness. And then, what they observe characteristics to be gentleman the present life. If they observance of the fifth precepts not only contributes to happiness in the life and peace in society, it also preparesaperson for the practice of Mental Development.
I think that according to the teachings of the Buddha, in order to understand the five precepts exactly one must clearly observe and abandon the latent tendencies. Later, he will free from all suffering. So, I want this era children to give knowledge and to know the five precepts are very important for the universal people and go to free from suffering.
That is why, I want you to confirm about this research title for my master of philosophy degree.
လူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်သော ငါးပါးသီလကိုယ်ကျင့်တရားများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတင်ပြခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ရေးချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သီလနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူငယ်တွေ သိပ်နားမလည်ကြလို့ပါ။ တကယ်လို့ သီလအကြောင်းကို လူငယ်တွေနားလည်မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ ငါးပါးသီလကို နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ မျက်မှောက်ဘ၀မှာလည်း လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်မယ်။ နောက်ဘ၀တွေမှာလည်း ချမ်းသာသုခနဲ့ပြည့်စုံပြီး နောက်ဆုံး မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုပါ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သီလအကြောင်းကို ဦးဇင်းအနေနဲ့ ပညာပေးချင်တဲ့အတွက် ရေးချင်တာပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ပါမောက္ခက what is Sila? သီလဆိုတာ ဘာလဲတဲ့ မေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဦးဇင်းကလည်း သီလဆိုတာ ပါဠိတော်မှာတော့ အမြဲလေ့ကျင့်လိုက်နာစောင့်ထိန်းတာကို သီလလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Habitaul action is Sila in the Pali literature. If we do something again and again in everyday, it is called habit and Sila.
အဲဒီလိုလည်း ဦးဇင်းက ပြောလိုက်ရော သူက ဆက်ပြောပါတယ်။ If we are doing something from time to time, it is not habit or Sila. If we take precepts at full moon day only, it is not habit and Sila. It may be onceaweek, onceamonth and onceayear, it can not be called as habitual action or Sila. If someone takes the precepts in day to day life, it is called as habitual action and Sila.
ကောင်းလိုက်တဲ့ အပြောတွေပါပဲ။ တစ်ရက်တလေမှ စောင့်ထိန်းတဲ့သီလ၊ တစ်ပါတ်မှ တစ်ခါသာ စောင့်ထိန်းတဲ့သီလ၊ တစ်လမှ တစ်ခါသာ စောင့်ထိန်းတဲ့ သီလမျိုးကို သီလလို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အမြဲမပြတ် စောင့်ထိန်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှသာ အဲဒါကို သီလလို့ခေါ်သလို အဲဒီလူကိုလည်း သီလရှိသူလို့ ခေါ်ပါသတဲ့။
အဲဒီတော့ ဦးဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ထင်နေတာက တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက် သီလလုံခြုံတဲ့လူကို သီလရှိသူလို့ ထင်နေပါတယ်။ ဒါဟာ မှားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နေ့စဉ်မပြတ် ငါးပါးသီလလုံခြုံတဲ့သူမှသာ အဲဒီလူကို သီလရှိသူလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ဟာ တစ်ပါတ်တစ်ခါသာ စောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်သီလလေးရှိတာကို အားရမနေဘဲ တကယ်သီလရှိသူဖြစ်ဖို့အတွက် ငါးပါးသီလကို နေ့စဉ်လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါပြင် ပါမောက္ခက သီလနဲ့ပတ်သတ်သမျှကို မင့်သိသလောက်ပြောစမ်းပါဆိုတော့ ဦးဇင်းကလည်း ကိုယ်ဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေကို ပြောပြလိုက်တာပေါ့။ ဘယ်လိုပြောပြလိုက်သလဲဆိုတော့
I think that someone become part of one’s life. There are five important aspects of life. There are,
ငါးပါးသီလဟာ လူသားတိုင်း စောင့်ထိန်းရမဲ့သီလလို့ မြတ်ဗုဒ္ဓမိန့်ခဲ့တာဟာ တကယ်မှန်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူ့ဘ၀မှာ လူသားတစ်ယောက်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာဟာ (၅)ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
(၁) ဘ၀ရဲ့ လုံခြုံမှု၊ အန္တရာယ်ကင်းမှု။
သူ့တစ်ပါးအသက် မသတ်ရင် ဘ၀မှာ အသက်အန္တရာယ်မကြုံရပါ။
သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို မခိုးရင် ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။
သူတစ်ပါးသားမယားကို မပြစ်မှားရင် မိသားစုဘ၀ ပျော်ရွှင်စွာ နေရပါလိမ့်မယ်။
သူတစ်ပါးကို လိမ်မပြောရင် ဂုဏ်သတင်းကျော်စောမှု၊ ချီးကျုးခံရမှုတွေ ရပါလိမ့်မယ်။
အရက်သေစာ မသောက်စားရင် ကျန်းမာရေး ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေဟာ ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်းခြင်းရဲ့ အကျိုးရလဒ် အကျဉ်းချုပ်ပါ။ အကျယ်ကို မိမိတို့ဉာဏ်နဲ့ ချဲ့မြင်စဉ်းစားကြည့်ပါက အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ သိရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ငါးပါးသီလကို မြတ်ဗုဒ္ဓမပွင့်ကတည်းက လူသားတွေဟာ စောင့်ထိန်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတော့လည်း ဒီငါးပါးသီလဟာ လူသားအားလုံးရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်လို့ မဖြစ်မနေ စောင့်ထိန်းလိုက်နာရမဲ့ အရာတွေပါလို့ မိန့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့လူသားများအားလုံး ငါးပါးသီလကိုတော့ လုံခြုံအောင်ထိန်းနိုင်ဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါတယ်။
ဒါကတော့ ဦးဇင်းနဲ့ ပါမောက္ခချုပ်တို့ရဲ့ အမေးအဖြေလေးတချို့ကို အချိန်ရသလောက် ရေးပေးလိုက်တာပါ။ နောက်မှ ကျန်တာတွေကို ဆက်ရေးပါဦးမယ်။ အဲဒီလို ဦးဇင်းက ကိုယ်ရေးချင်တာကို အပြန်အလှန်ငြင်းခုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ ပါမောက္ခချုပ်က မင့်လုပ်မဲ့ M.phil ဘွဲ့က မြင့်တယ်။ ဒီလိုခေါင်းစဉ်နဲ့တော့ မရဘူးတဲ့။ ဒီခေါင်းစဉ်က B.A M.A တွေရေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်တဲ့။ အဲဒီတော့ ဒီထက်မြင့်တဲ့အရာတွေကို ရေးပါတဲ့။ ဥပမာ-မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဒါယကာ-ဒါယိကာမတို့ရဲ့ ကွဲပြားသောအချက်အလက်များကို နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ရဟန်းတော်များရဲ့ မတူကွဲပြားမှုကို နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း၊ ဒါမဟုတ် ကျမ်းတစ်ခုကို ထပ်မံဖွင့်ဆိုတင်ပြပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ပါဠိတော်များကို ထပ်ဖွင့်တင်ပြတဲ့ ဋီကာကျမ်းများကို အင်္ဂလိပ်ပြန်ပါတဲ့။
ဆရာပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေက ကိုယ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့အရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမ်းရေးရမှာဆိုတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ်လေ့လာများတဲ့ဟာ ဖြစ်မှသာ ကောင်းကောင်းရေးနိုင်မှာလေ။ နောက်ပြီး ဦးဇင်းက လူတွေအတွက် အဓိက ပိုအသုံးဝင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မဲ့ဟာကို ရေးပေးချင်တာလေ။ အဲဒါကြောင့် ဘာကိုရေးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီတစ်ပါတ်အတွင်း စဉ်းစားပြီး နောက်တစ်ပါတ်မှာ သွားဆွေးနွေးရမှာမို့ ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိသတ်များလည်း ခေါင်းစဉ်လေးများ စဉ်းစားပေးနိုင်ရင် စဉ်းစားပေးကြပါဦးလေ။ ဦးဇင်းကတော့ နေ့စဉ်ခေါင်းမူးနေတယ်။
ဦးဇင်းလည်း ဒီနေ့တွေ့ကြုံရရှိလိုက်တဲ့ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတများဟာ အလွန်တရာ အသုံးဝင်တန်ဖိုးများတဲ့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ မသိကြတာက များတဲ့အတွက် ချက်ခြင်းရေးလိုက်တာပါ။ ဒီအကြောင်းတွေကို အားလုံးသိရအောင် ဂျာနယ်စာစောင်မှာပါထည့်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျာနယ်အတွက် သီးသန့်ရေးပေးဖို့ အချိန်မပေးနိုင်သေးတာနဲ့ အွန်လိုင်းပရိသတ်ကို အရင်ပညာပေးလိုက်တာပါ။ ဂျာနယ်မှာထည့်မယ်ဆိုရင် သေချာလေးဖတ်ကောင်းအောင် အချိန်ပေးရမှာမို့ နောက်အားမှပဲ ရေးပေးတော့ပါမယ်။ အွန်လိုင်းမှာကတော့ ဖြစ်သလိုရေးလည်း ကိစ္စမရှိတော့ ရတဲ့အချိန်ကို ဖတ်ဖြစ်အောင်တော့ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
ခု ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ဗဟုသုတများကိုတော့ လူများများသိလေ ပိုကောင်းလေမို့ အားလုံးတက်နိုင်သမျှ လူသားအားလုံးရဲ့ မျက်စိရှေ့ရောက်အောင် ဖြစ်နိုင်ရင် မေးလ်များကနေပါ တဆင့်ဖြန့်ဝေပေးကာ ဖတ်ဖြစ်အောင်လည်း တိုက်တွန်းစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဦးဇင်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီး ဦးဇင်းရဲ့ စေတနာတွေ ပညာဒါနတွေကလည်း ပိုမိုထမြောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်သလို ဖြန့်ဝေပေးသူ၊ တိုက်တွန်းပေးသူအားလုံးလည်း ပညာပါရမီဖြည့်ကျင့်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမယ်။ အားလုံး အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ တိုးပွားလျက် လိုရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်……..။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 4:18 PM